Nagu saabsan - Haiyang Luhai Electronic Commerce Co., Ltd.
Haiyang Luhai Electronic Commerce Co., Ltd. waxaa la dhisay sanadka 2020 magaalada Yantai, afarta warshadood ee wax soo saarna waxay ku yaalliin magaalada Tai'an. Ka dib dhowr sano oo horumar ah, awoodda wax soo saar sanadle ah ee muraayadda dhammeysay waxay gaartay 200,000 tan oo leh 100 foornooyin iyo in ka badan 20 khadadka wax soo saarka. Qiimaheeda guud ee hantida ayaa gaaraya RMB lix boqol oo milyan oo waxay leedahay in kabadan 1000 shaqaale.
Waxaan nahay soo saare xirfadle ah oo ku howlan cilmi baarista, horumarinta, iibinta iyo adeegga dhalada biirka dhalada ah, dhalada keydinta dhalada, dhalada malab dhalada ah, saliida wax lagu karsado iyo weelka wax lagu kariyo, basbaaska galaaska iyo milixda iyo wixii la mid ah. Ganacsigeenna dhoofinta wuxuu ku faafay adduunka oo dhan suuqyo ballaaran oo ku yaal Yurub, Ameerika iyo Oceania oo dhan adduunka oo dhan, iyo mugga iibka dhalooyinka dhalada ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican warshadaha. Waa baacsigayaga joogtada ah si aan u noqono soo saaraha dhalada-fasalka-sare ee Shiinaha oo aan u abuurno qiimaha ugu weyn macaamiisheena.Ka sokow, waxaan dadaal weyn ugu jirnaa inaan horumarinno alaabooyin cusub si aan ula kulano shuruudaha kala duwan. Shirkadeena waxay leedahay khibrad hodan ah dhalooyinka quraaradaha ah.
Luhai waxay leedahay qaab ganacsi oo ku habboon macaamiisha oo ku saleysan kaabayaasha ugu macquulsan ee shirkadda, waaxda qaabeynta takhasuska leh, tijaabooyinka tayada adag ee xoogga leh ee dhammaan khadka wax soo saarka, dabagalka joogtada ah iyo warbixinta iyo sidoo kale adeegga macmiilka wax ku oolka ah ee kooxdayada caalamiga ah ee xirfadleyda ah.
U hogaansanaanta mabda'a ganacsiga ee waxtarka labada dhinac, waxaan ku yeelanay sumcad la isku halleyn karo macaamiisheenna dhexdeeda sababtoo ah adeegyadeena xirfadeed, alaab tayo leh iyo qiimaha tartanka. Haddii aad hayso fikrado ama fikrado cusub oo ku saabsan alaabada, fadlan nala soo xiriir.
Luhai wuxuu si daacad ah u soo dhaweynayaa asxaabta gudaha iyo dibaddaba si ay ugala hadlaan iskaashiga nala, si aan u raadino horumar guud oo aan u abuurno berrito dhalaalaya!
1.HIGH TAYO Hubinta tayada wax soo saarka, oo leh liisanka sheyga, si loo bixiyo adeegga iibka ka dib.
2.FIRST-FASALKA QALABKA Kormeeraha dhalada otomaatiga ah, wiishka wax lagu dhejiyo, qaboojiye & tijaabinta cabbirka dusha dhamaadka dhamaadka, nidaamka baakada otomaatiga ah, rinjiyeynta elektaroolka.
3. IIBINTA CAALAMKA Waxaan leenahay dhowr warshado wax soo saar oo caan ah gudaha iyo dibaddaba oo kala saxiixday xiriir iskaashi.
ADEEGGA 4.24-SAACAD Waxaan leenahay 24 saac adeegga khadka tooska ah, jawaab deg deg ah si aan kuugu siino khibrada cajiibka ah.
5. KOOXDA XIRFAD LEH Waxay u heellan tahay xakamaynta tayada adag iyo adeegga macaamiisha oo laga fiirsado, xubnaheenna khibradda leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka wada hadlaan shuruudahaaga ayna hubiyaan qanacsanaanta macaamiisha oo buuxda.
Alaabtayada muraayadaha ayaa soo martay shahaadooyin badan oo gudaha iyo dibedda ah, dhammaan alaabta ceeriin waxaa lagu caddeeyay heerka cuntada, sidaa darteed dhammaan alaabada dhalada waxaa si weyn loogu isticmaali karaa kiimikada, dawooyinka, cuntada iyo beeraha kale.